BBC Somali - Warar - Dood kulul Sarkozy iyo Hollande
Dood kulul Sarkozy iyo Hollande
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 3 Mey, 2012, 10:27 GMT 13:27 SGA
Madaxweynaha Faransiiska, Nicolas Sarkozy, ayaa dadaalka uu ugu jiro in uu shaqadiisa xajisto wuxuu u geeyay in uu dood telefishinka ah oo lagu tilmaamay in uu ku guuleysan waayay in uu isaga reebo ninka la tartamaya.
Waxaa loo arkayay fursaddii ugu dambeysay ee Madaxweyne Sarkozy uu uga soo kaban lahaa guusha hordhaca ah ee looga helay wareeggii koowaad ee doorashada.
Axadda ayaa doorashada wareeggeedii labaad uu dhici doonaa.
Sahan la sameeyay wuxuu saadaalinayaa in lix dhibcood uu horreeyo Farncois Hollande oo ah murashaxa xisbiga Hantiwadaagga.
Intii dooddu socotay Sarkozy wuxuu waday weerar isaga oo Mr. Hollande ku eedeeyay in uu yahay beenaale.
Laakiin Hollande si deggan wuxuuna ku celceliyay in Madaxweynuhu inkirsan yahay in uu qaato mas'uuliyadda hawshiisa.
Riek Machar: Afgembi kama samayn Juba